I-Remix Mini: Iphrojekthi ehlose ukuletha i-Android ku-PC ngokuqinisekile | Kusuka kuLinux
Abasebenzisi abaningi badinga kuphela uhlelo lokusebenza ukwenza imisebenzi eyisisekelo kakhulu. Ukubheka i-imeyili, izingosi zethu ze-Intanethi esizithandayo, ukubukela i-movie noma ukulalela umculo, asidingi ikhompyutha enamandla amakhulu, noma i-Operating System eyinkimbinkimbi.
Ngaphandle kwamaWindows, i-OSX, i-UNIX, i-BSD (nezisuswayo) kanye ne-GNU / Linux, kunezinye izinhlobo zezinhlelo zokusebenza ebezilokhu zanda selokhu kwafika i-Smartphone, i-Android ne-iOS zithandwa kakhulu okwamanje. I-Android, njengoba ivuleke kakhulu kuleli cala, isetshenziselwe ukudala amaphrojekthi athile asivumela ukuthi siyisebenzise ngaphandle komakhalekhukhwini. Ku-FromLinux vele sikhulumile ngayo, kanjalo nabafana abavela UkuTecnología.net, nge le ndatshana enhle kakhulu.
Okuncane kungaba ngaphezulu. Lesi yisiqubulo sephrojekthi entsha esesigabeni seCrowfounding in I-Kickstarter, futhi lokho kuthembisa ukusinika ikhompyutha ene-Android 5 ngokuzenzakalela, ngomklamo omuhle nobuchwepheshe obusha, noma okungenani kumnandi ukusebenzisa. Kulokhu basebenzisa imfoloko ebizwa nge-Remix OS.
Eqinisweni, njengamanje ungathenga i-Remix Mini esezingeni lokungena nge-Kickstarter, okungukuthi, ngesikhala esincane sokugcina kanye ne-RAM encane ngama-dollar angama-30 kuphela, njengoba phambilini benikeze inguqulo engu- $ 20 eyayithengisiwe.
Engxenyeni yokuxhuma i-Remix Mini kubonakala kuhlome ngakho konke, yisho izimbobo zeWIFI, iBluetooth, iLAN ne-USB. Konke lokhu kusetshenziswa kwamandla ethembisayo cishe okuhlekisayo.
Ngicabanga ngobuqotho ukuthi kungumsebenzi othakazelisa kakhulu, ikakhulukazi abalandeli be-Android manje abangaba nabo ocingweni lwabo nakukhompyutha, bejabulela izinzuzo nezinsizakalo ezinikezwa yiGoogle ngohlelo lwayo lokusebenza. Uma ucabanga ukuthi iningi lezinketho zokusebenzisa noma lokulingisa izinhlelo ze-Android lisuselwa kuzandiso noma iziphequluli zewebhu, ngicabanga I-Remix Mini kube ngumkhiqizo oyingqayizivele.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » I-Remix Mini: Iphrojekthi ehlose ukuletha i-Android kwi-PC ngokuqinisekile
Masingakhohlwa i-android x86 🙂 Futhi kungenye iphrojekthi ephuma lapho, kepha futhi banezinto okufanele bazipholishe
uma lokho kuyi "desk," kuyamangalisa.
Ngisebenzise i-Android x86 futhi ayithokozisi ngandlela thile, ngenxa ye-scrotum, kepha izinhlelo zokusebenza ezingajwayelekile nezinye i-Android enazo zikhululekile kakhulu ukuzisebenzisa kusuka ku-PC
Bengisho ideski, namuhla i-dyslexia yami ibangelwa.
Ngingene ekhasini lephrojekthi futhi ngibonile ithebhulethi, akukho lutho lokufisa labo be-MS
Uqinisekile ngalokhu okushoyo?.
Unethebhulethi ye-MS futhi ine-Remix OS yokuqhathanisa….
... selokhu ngakhipha umbono wami, umbono.
Phakathi kwama-TV amaningi we-Android amabi futhi anezinkinga, le foloko ye-PC ivelele futhi kude kakhulu, idizayini yinhle kakhulu kuneLollipop futhi isetshenziswa kakhulu kubaqaphi. Umkhiqizo omuhle.
Ngicabanga ukuthi imiqondo "yezimpande", "i-xposed" nokunye okunjalo ayisebenzi kule divayisi, akunjalo?
Ngifisa sengathi ngabe besine-desktop enjalo kuLinux
Sinama-desktops angcono ama-3 ku-linux
Kuyindaba yokuthatha ideskithophu bese uyiguqula ngentando.
Ingabe kuyinto yami noma ifana ne-gnome3?
Le XD enhle.
Ngokuqondene nobuchwepheshe bezingcingo eziphathwayo kuLinux, akukho ntuthuko, akukho lutho oluthokozisayo, awukwazi ngisho nokuthuthukisa uhlelo lwakho lokusebenza lwenkomfa yomsindo nevidiyo esheshayo.
Kuze kube manje ubukeka emuhle. Ine-interface ekhangayo nedizayini enhle kakhulu yehadiwe ... Kuzodingeka ukubona ukuthi ngabe konke kungumklamo omsulwa noma ngabe kungumsebenzi ngempela esingasizakala ngawo.
Ngingathanda ukuthola ithuba lokuzama ngakho ngiyabonga
Uphunyukile kuleli phutha: «I-Remix Mini ibonwa njengomkhiqizo oyingqayizivele.» noma nginephutha.